August 2014 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Khant Phyo Win at 2:00:00 PM 0
Khant Phyo Win at 12:55:00 PM 0
Khant Phyo Win at 6:53:00 PM 0
Khant Phyo Win at 6:34:00 PM 0
Khant Phyo Win at 12:10:00 PM 0
Khant Phyo Win at 11:59:00 AM 0
Khant Phyo Win at 1:22:00 PM 0
Khant Phyo Win at 8:22:00 AM 0
Myanmar IT Sky at 5:13:00 AM 0
G730-U00 Build Number နောက်ဆုံး 151 Vroot မတိုးသူများအတွက်
Myanmar,Root,Keyboard တစ်ခါထဲထည့်သွင်းပေးမည့် Boot Img လေး ကို ကိုဖြိုးချမ်း ဆီကနေပီး ပြန်
Share ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ. အစကတော့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ အချို့က အဆင်မပြေဖြစ်နေကြလို့ပါ..
ဒါလေးကို SP Flash Tool ကနေ သွင်းလိုက်ရင်ရပါပြီ။ သွင်းပြီးလို့ ဖုန်းပြန်တက်လာ
လာခြင်း မြန်မာစာတွေလွဲနေရင် ရိုးရိုး Restart ချပေးပါ။
အောက်မှာ Boot Img နဲ့ SP Flash Tool နှစ်မျိုးစလုံး ကိုဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
ကိုဖြိုးချမ်း ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
Boot Img >> LINK (1)
SP Flash Tool >> LINK (2)
Khant Phyo Win at 12:12:00 PM 0
Ze Booc 811 miniPad Firmware
Anonymous at 12:04:00 PM 0
Download Link2Download Link 1 အဆင်ပြေရင်အောက်ပါကြော်ငြာကိုတစ်ချက်ကလစ်ခဲ့ပါ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Khant Phyo Win at 1:37:00 PM 0
Coolpad Firmware တင်နည်း pdf စာအုပ် ။ < By - Galaygachay >
Ye Naing at 12:57:00 PM 0
Credit to - Galaygachay
Coolpad ဖုန်းလေးတွေ ဈေးကွက်ဝင် အသုံးများလာနေ....
Service လုပ်ပေးရင်း ဖန်လုံးပြန်တင်ဖို့လိုလာတဲ့အခါ ....
တစ်ခါတရံ ....How to..??????????
ယခုစာအုပ်ထဲမှာတော့ Ko Galaygachay မှ တစ်ဆင့်ချင်း၊
ဒေါင်းရန်လင့် >>> http://download758.mediafire.com/0wt86z9n8b4g/8pulzhxwa9efui8/Coolpad+%28Galaygachay%29.pdf
ဖုန်းနှင့် လက်ပ်တော့များ ကိုင်ထားပြီး လမ်းပျောက်နေသူများကို သတိ
Unknown at 11:05:00 AM 0
လက်ထဲတွင် နောက်ဆုံးပေါ် တယ်လီဖုန်းဟန်းဆက် (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့ ကိုင်ထားသည့် အသားဖြူဖြူနှင့် လူများက လမ်းပျောက်နေသည်ဟုဆိုကာ သင့်ထံရောက်လာပါက သင်သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများ၏ သားကောင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခံလိုက်ရသည်ဆိုသည်မှာ သေချာသလောက်ရှိပြီဟု တွေးထားသင့်သည်။
အမှန်တကယ် လမ်းပျောက်သူလား၊ လူလိမ်များလားဆိုသည်ကို ဖော်ပြပါအချက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်စေလိုပါသည်။
ထိုသူများက ပထမအဆင့်အနေဖြင့် မြန်မာစကားတစ်လုံးတလေမှ မပြောတတ်သည့်ဟန်ပန်ဖြင့် သင်နှင့် အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှ နေရာတစ်ခုကို မေးမြန်းပြီး ထိုနေရာတွင် သူ၏မိတ်ဆွေနှင့် အချိန်းအချက်ပြုထားကြောင်း ခြေဟန်လက်ဟန်ဖြင့် ရှင်းပြလိမ့်မည်။ သူစောင့်နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း သူ၏မိတ်ဆွေ ရောက်မလာသေးကြောင်းလည်း ရှင်းပြလိမ့်မည်။
ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် သူ့ထံတွင် ပိုက်ဆံပြတ်လပ်နေပြီး လွန်စွာအခက်အခဲရှိကြောင်း ကူညီသည့်အနေဖြင့် သူ့တွင်ပါလာသည့် နာမည်ကျော် ဟန်းဆက် (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့များကို ပေးနိုင်သည့်ဈေးဖြင့် ၀ယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
သင့်ထံရောက်လာသည့် လမ်းပျောက်သူများက အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဆိုပါက ယခင်လိမ်လည်ခံရသူများနည်းတူ သင်လည်း လိမ်ခံရတော့မည် ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များက ရန်ကုန်မြို့၏ လမ်းမများထက်၌ လက်ထဲတွင် နောက်ဆုံးပေါ် တယ်လီဖုန်းဟန်းဆက် (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့ကိုင်ထားသည့် အသားဖြူဖြူနှင့်လူများသည် မကြာခဏ လမ်းပျောက်ခဲ့ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသားများအဖြစ် ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ မိတ်ဆက်ကြပြီး သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ၀တ်စားထားကြသည့် လိမ်လည်သူများ၏ ပစ်မှတ်သည် ယုံလွယ်သူများ၊ အသနားစိတ်ကြီးပြီး အကူအညီပေးသူများနှင့် လောဘကြီးသည့်လူများ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်ခန့်အတွင်းက ရန်ကုန်မြို့တွင် လိမ်လည်ခံခဲ့ရသူ သုံးဦးခန့်ကို 7Day မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာ လာရောက်လိမ်လည်သူများ၏ ပုံစံသည် တစ်ပုံစံတည်းနီးပါးဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
‘‘သူတို့က ဗမာစကားတစ်လုံးမှ မတတ်တဲ့ပုံစံနဲ့။ အင်္ဂလိပ်လို တစ်လုံးစ၊ နှစ်လုံးစ ပြောတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုကျတော့ No Money Hungry (ပိုက်ဆံမရှိဘူး၊ ဗိုက်ဆာတယ်)ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်’’ဟု လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ခန့်က Samsung အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း လိမ်လည်ရောင်းချခံခဲ့ရသည့် ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ဦးစည်သူကပြောသည်။
၎င်းတို့သည် လွန်ခဲ့သည့်သုံးနှစ်ခန့်မှစတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် လှုပ်ရှားခဲ့ကြပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှစတင်ပြီး ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအချို့ရှိ မြို့များသို့ပါ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
လမ်းပျောက်သူများက သူတို့၏ဖုန်းနှင့် လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာများကို ပြင်ပပေါက်ဈေးထက် အဆမတန်လျော့နည်းသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် ၀ယ်ယူသူများအား ဆွဲဆောင်ကြသည်။
၎င်းတို့ပြန်သွားပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ပျက်စီးသွားခြင်းနှင့် အဆိုပါပစ္စည်းများသည် အတုများဖြစ်နေခြင်းတို့ကို သတိထားမိချိန်တွင် လမ်းပျောက်သူများက နောက်တစ်ဦးကို ထပ်မံလိမ်လည်ရန် အခြားတစ်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေလောက်ပြီ ဖြစ်သည် ။
‘‘အဲဒီလိုပစ္စည်းတွေက တော်တော်သတိထားရတယ်။ ကိုယ်က သူ့ကိုကူညီတယ်ဆိုပေမယ့် ခိုးရာပါပစ္စည်းလိုမျိုးဖြစ်နေရင် လူလိမ်ခံရရုံတင်မကဘူး ထောင်ပါကျနိုင်တယ်။ ခိုးရာပါပစ္စည်း လက်ခံမှုက ထောင်သုံးနှစ်အထိ ချလို့ရတယ်’’ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောသည်။
လိမ်လည်ခံရသူအများစုကလည်း ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခြင်းမပြုဘဲ လူသိမခံခြင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းခြင်းတို့ကြောင့် လိမ်လည်သူများ ပိုမိုအတင့်ရဲလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေက ပြောသည်။
‘‘လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်တုန်းက အဲဒီလိုလာလိမ်တဲ့ တရုတ်တော်တော်များများကို နယ်စပ်ကနေ တရုတ်ပြည်ထဲ ပြန်ပို့ခဲ့ရဖူးတယ်။ မန္တလေးမှာရော၊ နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရော အဲဒီလိုလိမ်လာတာ ကြာပြီလို့သိရတယ်’’ဟု လိမ်လည်သူများအား နယ်စပ်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကပြောသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများ အကန့်အသတ်မရှိ ရောင်းချနေကြောင့် လိမ်လည်သူများ၏ ပစ်မှတ်များသည်လည်း တစ်စတစ်စကြီးထွားလာနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသုံးများသည့် Samsung, Huawei စသည့် မိုဘိုင်းဟန်းဆက်ကုမ္ပဏီများကလည်း ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများကို တုပရောင်းချခြင်းများမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
‘‘ဈေးကွက်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဟန်းဆက်တွေကို အတုတွေတွေ့ရတဲ့အတွက် အတုအစစ်ခွဲခြားနည်းကို ဂျာနယ်တွေထဲမှာလည်း ကြေညာသလို ဟန်းဆက်အတုတွေ့ရင် သတင်းပေးတဲ့သူတွေကို ဆုငွေပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ လုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်’’ဟု Huawei မြန်မာကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချိရေးတာဝန်ခံတစ်ဦးကပြောသည်။
Huawei ဖုန်းများကို အတုနှင့်အစစ် ခွဲခြားနိုင်ရန်နှင့် ဈေးကွက်အတွင်း၌ အတုများကို တွေ့သောကြောင့် သတင်းပေးလိုပါက Huawei ၏ Customer ServiceCenter သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်းလည်း ၎င်းကပြောသည်။
အလားတူပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသုံးများသည့် Samsung အမှတ်တံဆိပ် ဟန်းဆက်များ တုပရောင်းချခြင်းများမှ ကာကွယ်ရန် အသေးစိတ်အစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း Samsung မြန်မာရုံးခွဲ၏ Head of Channel Management Mobile ဦးဇာနည်ဝင်းထွဋ်ကပြောသည်။
‘‘ဈေးကွက်ထဲမှာ အတုတွေကတော့ မကြာခဏတွေ့နေရတယ်။ Samsung ဟန်းဆက်အတုဆိုတဲ့နေရာမှာ တချို့ကလည်း ပုံစံတုလိုက်လုပ်ပြီးတော့ ရောင်းကြတယ်။ တချို့ကလည်း Offical တရားဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ တင်သွင်းလာတဲ့အခါမှာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ကွန်ရက်နဲ့ မကိုက်ညီတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်’’ဟု ဦးဇာနည်ဝင်းထွဋ်က ပြောသည်။
လက်ထဲတွင် နောက်ဆုံးပေါ် တယ်လီဖုန်းဟန်းဆက် (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့ကိုင်ထားသည့် အသားဖြူဖြူနှင့်လူများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာခဏ လမ်းပျောက်လျက်ရှိသည်။ လမ်းပျောက်သူများကို ကူညီရင်း ယုံလွယ်သူများ၊ အသနားစိတ်ကြီးပြီး အကူအညီပေးသူများနှင့် လောဘကြီးသည့်လူများ ကိုယ်တိုင်လည်း မကြာခဏ လမ်းပျောက်သွားခဲ့ရသည်။
Coolpad Firmware များ ... << Coolpad Firmware Collection >>
Ye Naing at 9:43:00 PM 0
Credit to - သားကောင်းရတနာ (နည်းပညာ)
Flash Tool ဒေါင်းယူရန်>>>>Download Smart Phone Flash Tool
Download Coolpad Mobile USB Modem Drivers
Android application တွေကို apk tool နဲ့အလွယ်ဆုံးပြုပြင်ကြမယ်
Min Oaker at 12:21:00 PM 0
ဒါလေးကတော့ သားတို့ apk တွေကို ပြုပြင်လို့ရမယ့် နည်းလေးပါ
သားကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူး FB ပေါ်က Bro Htoo Phyo(MITG)
ကတစ်ဆင့်သိလာတာပါ သူပြောတာကတော့ apk တွေကို
ကိုယ့်ဥာဏ်ရှိသလောက်ပြင်လို့ရမှာပါ ။ apk ရေးတာ မဟုတ်ဘူးနော်
ရှိပြီးသား apk ကိုပဲ ပြင်လို့ရမှာ။ဒီမှာတော့ မတင်ပေးတာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး
ကဲအောက်မှာ apk tool နဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်း စာအုပ်ကို ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
Download Apk Tool; (50.4) MB
Download Book ;(2.98) MB
mmitdeveloper at 9:06:00 AM 0
နဲ့လုပ်ဆောင် ပေးနိုင် မယ့်Driver boosterလေးဖြစ်ပါတယ်။
Min Oaker at 9:08:00 PM 0
Huawei Ascend P6 Rooting Guide
Huawei ရဲ့လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့Ascend P6ရဲ့Rootလုပ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီRootနည်းလေးကတော့လွယ်ကူပါတယ်။အားလုံးသိပြီးသား
ဖြစ်တဲ့Root Toolလေးတစ်ခုပါဘဲဗျာ။ERoot နဲ့Rootလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။Rootမလုပ်ခင်မှာDeveloper Optionကို ဖွင့်ဖို့အတွက်SettingထဲကAbout Phoneထဲကversion numberကိုငါးကြိမ်လောက်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ Developer Optionပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့Developer Optionထဲကိုဝင်ပြီးUSB Debugging ကိုonပေးရမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။(MTP)deviceအနေနဲ့ဘဲချိတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ERootလေးကို
Download Eroot; (1.5) MB
Samsung Galaxy Grand2ကို root မယ်​
Min Oaker at 8:30:00 PM 1
Samsung Galaxy Grand2(SM-G7102) ကို Root လုပ်ခြင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်အလွယ်ကူဆုံroot လုပ်နည်းကို တင်ပေးလိုက်တာပါ rootမလုပ်ခင် samsung usb driver တွေ အရင်သွင်းထားပါ။Root လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ဖိုင်းတွေ ဒေါင်းလိုက်ပါOdin ဖိုင်းကိုဒေါင်းရန်Root ဖိုင်းကိုဒေါင်းရန်ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့Odin ဖိုင်းကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီရင်ဖုန်းကို Downloand mode ဖြစ်အောင် vol-dowm+home+powerပြိုင်တုနိုပ်ပါ။vol upကိုထပ် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ downloanding စာတန်းတက်လာပါမယ်ဒါဆိုဖုန်းကို computer နဲချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ Odin ဇယားကွက်မှာ အပြာရောင်တန်းတက်နေပြီဆိုရင်ချိတ်ဆက်မှုအောင်မြင်ပါပြီဒါဆိုPDA နေရာမှာနှိပ်ပြီစောစောကဒေါင်းထားတဲ့ Root Zip ဖိုင်းကို ရွေးပေးလိုက်ပါပြီရင် Start နေရာမှာနှိပ်ပြီ ခဏစောင့်နေပါ။ဖုန်းက Reboot ကျပြီ ပြန်တက်လာရင် Superuserapp လေရောက်နေပါပြီ ဒါဆိုroot ဖောက်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ။
Min Oaker at 7:54:00 PM 0
ကျွန်တော်တို့ နောက်ပိုင်း Wifi Zone တွေထဲမှာ Access သွားလုပ်ရင်။ Network မိနေပေမယ့် လိုင်းမရတာတွေကြုံတွေ့ နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်လိုင်းအားနည်းလို့ အဆင်မပြေတာက ပြသနာမရှိပေမယ့်။ Wireless Network ကို ARP attack လုပ်ပီး တော့ Wireless attack
လုပ်နိုင်တဲ့ Wifikill ကြောင့်လည်း သင့်စက် အထူးသဖြင့် သင့်ဖုန်း သင့် Latptop က အင်တာနက်မရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအထွေအထူး
မဟုတ်ပါဘူး။ android phone တလုံးကနေ attack လုပ်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီ apk လေးကိုတော့ wifikill လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ
root access ရှိဖို့ တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ အနာသိရင်ဆေးကတော့ရှိမှာပေါ့လေ။ Wifikill မှာ သင့်စက်ကလုပ်သမျှကို Monitor လုပ်နိုင်တဲ့
grab function တစ်ခုပါတဲ့အတွက်။ သင်မလုံခြုံ နိုင်ပါဘူး။အဲဒါကိုကာကွယ်နိုင်တာကတော့ Wifi Protector လို့ ခေါ်ပါတယ်။
သူကလည်း root access ရနေမှ wifikill ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
အောက်ကလင့်ခ်တွေမှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Download; (1.56) MB
Anonymous at 12:26:00 AM 0
PC Viber Data File
Unknown at 7:21:00 PM 0
ကွန်ပျူတာအတွက် ဗိုက်ဗာဗားရှင်းအသစ်ထွက်တာ တော့သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ ဒါပေမယ့်ဆော့ဝဲဒေါင်းတာ မကြာပေမယ့် Data File တွေဒေါင်းတာတော့ အရန်းကြာလွန်းလို့ စိတ်ညစ်ပြီး ဆက်မဒေါင်းတော့ပဲ ပိတ်ပစ်လိုက်ကြပြီး နဂိုအဟောင်းလေးနဲ့ပဲ ပြန်လည်ကြေနပ်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဘာဒေါင်းလော့ဆွဲစရာမလိုတော့ပဲ ကွန်ပျူတာ C- Program files ထဲမှာထဲ့ပေးပြီး ဆော့ဝဲလေးကိုဖွင့်ပြီး နဂိုကွန်ပျူတာမှာ ဗိုက်ဗာဆော့ဝဲမရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများအနေနဲ့ ကုဒ်တောင်းပြီး အသုံပြုနိုင်ပါတယ် နဂိုဗားရှင်းအဟောင်း အသုံးပြုနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအနေနဲ့ နဂိုဆော့ဝဲလေးကိုဖျတ်လိုက်ပြီး data တွေထဲ့ပြီး ဖွင့်လိုက်တာနှင့် နဂိုပုံစံအတိုင်း မပျတ်ပဲဗားရှင်းအသစ်ပုံစံလေးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ မြန်မာဖောင့်အခက်ခဲ ဖြစ်လို့အော်နေမှာစိုးလို့ မြန်မာဖောင့်ပါ တခါထဲ ZIP ဖိုင်ထဲမှာထဲ့ပေးထားပါတယ်နော် ဒေါင်းလော့အခက်ခဲ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ နားလည်ပေးကြပါနော် လိုင်းမကောင်းလို့ နားလည်ပေးကြပါနော်
Video တည်းဖြတ် Photo သီချင်းနဲ့တွဲချင်သူများတွက် Ulead video studio 11
Anonymous at 4:25:00 PM 0
အပျော်တမ်း Video edit photo slide show လုပ်ချင်သူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံး video software တခုပါ အောက်မှာ Free Download ယူနိုင်ပါတယ်
Khant Phyo Win at 12:22:00 PM 0
သူ့ရဲ့ သိမ်ငယ်တဲ့ လျစ်လျူရှုမှုတွေ။
- ချစ်ခဲ့ရတာက ရင်တစ်ခုလုံးစာပါ။
သူရဲ့ ရင်နဲ့ မဆံ့တဲ့ အမုန်းတွေ။
​မေ​မေထံသို့ ( ၂ )
Khant Phyo Win at 12:16:00 PM 0
​မေ​မေ ​လောကကြီးဟာ အတုံအလှည့်​ရှိတယ်​ဆို​ပေမယ့်​
သား အနားကို မလာဝံ့ကြဘူးနဲ့တူတယ်​
သားအနားမှာ ၀န်းရံ​နေကြတယ်​ ​မေ​မေ။
သားရဲ့ ​စေတနာ​တွေက ​ဝေဒနာ​​ပင်​​တွေ​အဖြစ်​​ပေါက်​
Min Oaker at 9:18:00 PM 0
Computer software System Application
Folder Time Update
mmitdeveloper at 6:49:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။ဒါလေးက တော့ကိုယ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့Folderတွေရဲ့အချိန်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်လည်ပြုပြင် လို့ရမှာပါ။
Computer software System Tweak
mmitdeveloper at 6:48:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။ဒီAutorunလေးက တော့အလန်းစားလေးဗျ။သူ့ရဲ့Performanceတွေက တော့Systemရဲ့
loading timeကိုလဲလျော့စေတယ်။Bootတက်ရာမှာလဲလျှင် မြန်တယ်။System Performanceကိုလဲမြင့်တင် ပေးတယ်။သေချာတာက တော့Loading timeကိုတကယ်ကိုလျော့စေပါတယ်ဗျာ။
Computer software Update Checker
S4B Update Checker
mmitdeveloper at 6:47:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။ဒါလေးကိုလဲအရင် ကတင် ပေးဖူးပါတယ်။အခုတခါတော့
WWE Jigsaw for Android game
Unknown at 5:33:00 AM 0
လက်ဝှေ့ နပန်း သမားကို မလွတ်တန်းကြည့်တဲ့
မိတ်ဆွေတွေအတွက် android game လေးပေါ့
ယခုက မိန်းမ တွေ သတ်ပုတ်တဲ့ ပုံတွေကို အမှန်
kaungkalay အောက်ဆုံမှာ ပုံလေးတွေ ပြသထား
ပေးပါတယ် ကြည့်လိုက်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
G730-U00 Build Number နောက်ဆုံး 151 Root & Myanmar...
Coolpad Firmware တင်နည်း pdf စာအုပ် ။ < By - Galay...
ဖုန်းနှင့် လက်ပ်တော့များ ကိုင်ထားပြီး လမ်းပျောက်နေ...